Xildhibaan mustafa dhuxuloow oo ka shaqeeyay kulan dhex maray Itoobiya iyo Kheyre - Hablaha Media Network
Xildhibaan mustafa dhuxuloow oo ka shaqeeyay kulan dhex maray Itoobiya iyo Kheyre
HMN:- Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa kulan aan la shaacin la yeeshay safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Somalia, Ambassador Jamaaludiin Mustafa Cumar, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid uu kasoo shaqeeyay xildhibaan Mustaf Dhuxuloow oo aad ugu dhow ra’iisul wasaare Kheyre, xiriir wanaagsana la leh dowladda Itoobiya.
Kullankaan oo xafiiska ra’iisul wasaaraha saxaafadda warbixin ka siin ayaa la sheegay inuu ahaa mid uu soo qaban qaabiyay Xildhibaan Mustuf Dhuxulow, si la isugu soo dhoweeyo xiriirka dowladda Itoobiya iyo ra’iisul wasaare Kheyre.
Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow ayaa la sheegay inuu ka shaqeynaayo sidii dowladda Itoobiya iyo Somalia madmadowga ku jira meesha looga wada saari lahaa, waxaana kulankaan uu hordhac u yahay mid kale oo safiirka Itoobiya iyo madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo la isugu keenayo si dhowr qodob looga hadlo.
Lama oga in madaxweyne Farmaajo aqbali doono kulankaan oo ah mid dhabaha u xaarayo booqasho uu ka shaqeeyay Xildhibaan Dhuxuloow in ra’iisul wasaare Kheyre uu ku tago magaalada Addis Ababa si halkaasi ugala kulmo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn.
Arrintaan ayaa dhanka kale marka laga fiiriyo u muuqata mid xagal daacineysa booqashadii madaxweyne Farmaajo ku tegay Addis Ababa oo heshiisyo afka baarkiisa ah oo saxaafadda loo soo bandhigay labada dhinac ku gaareen laakiin weli muuqda khilaafka labada dowladood.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn oo sheegay in ay dhowrayaan isla markaana tixgelinayaan qaranimada Somalia, ayaa qunsulka u fadhiya Itoobiya magaalada Hargeysa uu qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyay Somaliland munaasabada 18-ka May ee dabaaldega maalinta gooni taaga Somaliland, taasoo caddeyneysa in weli uu jiro khilaafka Itoobiya iyo dowladda Somalia.
Dhinaca kale, xildhibaan Mustaf Dhuxuloow ayaa suuragal ah in uu booqdo magaalada Addis Ababa, si uu gogol xaar ugu noqdo safarka lagu wado in Ra’iisul Wasaare Kheyre ku tagayo dalka Itoobiya.
Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow ayaa hadda loo arkaa shaqsi galaangal badan ku leh xafiiska ra’iisul wasaare Kheyre oo qaraabo hoose yihiin, waxaana dhacda in shaqsiyaadka danaha ka leh ra’iisul wasaaraha ay xildhibaan Mustaf Dhuxulow u maraan.